स्थानान्तरण परिभाषा र उदाहरणहरू
विज्ञानमा कस्तो छ?
शब्द "ट्रांसमिटिना" भनेको शब्दको सामान्य प्रयोगको तुलनामा एक वैज्ञानिक, विशेष गरी एक फिजिकिस्ट वा रसायनज्ञको लागि फरक फरक हो।
(trăns'myo͞o-tā'shən) ( n ) ल्याटिन ट्रांसमिटर - "एक फारमबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्न"। ट्रांसमिट गर्न एक फारम वा पदार्थबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्न; बदल्न वा रूपान्तरण गर्नुहोस्। ट्रांसमिशन ट्रांसमिंग को कार्य वा प्रक्रिया हो।
अनुशासनको आधारमा स्थानान्तरणको बहु निर्दिष्ट परिभाषाहरू छन्।
सामान्य अर्थमा, ट्रांसमिशन एक फारम वा प्रजातिबाट अर्कोमा कुनै पनि परिवर्तन हो।
( कीमिया ) ट्रांसमिशन आधारभूत तत्वहरूको बहुमूल्य धातुहरू जस्तै सुन वा चांदीको रूपान्तरण हो। सुनको कृत्रिम उत्पादन, क्रिसोपियाया, अल्चेमिस्टहरूको लक्ष्य थियो, जो फिलोस्कोडरको स्टोनको विकास गर्न अचम्म लाग्न थालेको छ जुन यस स्थानमा पुग्न सक्षम हुनेछ। अल्टिमिस्टले राजनिति प्राप्त गर्न रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको प्रयोग गर्न कोसिस गर्यो। तिनीहरू विफल थिए किनभने आणविक प्रतिक्रियाहरु आवश्यक छ।
( रसायन विज्ञान ) ट्रांसमिशन एक रासायनिक तत्व को रूप मा एक दूसरे को रूपान्तरण हो। तत्व ट्रांसमिशन स्वाभाविक रूपमा वा एक सिंथेटिक मार्ग मार्फत हुन सक्छ। रेडियो सक्रिय क्षय, परमाणु विच्छेदन, र परमाणु संलयन प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् जसको द्वारा एक तत्व अर्को हुन सक्छ। वैज्ञानिकहरूले कणहरूसँग लक्षित परमाणुको नाकमा बमबारी गरेर अधिकांशतया ट्रांसमेट तत्वहरू, यसको परमाणु नम्बर परिवर्तन गर्न लक्ष्यलाई बलियो बनाउँछ, र यसैले यसको मौलिक पहिचान।
सम्बन्धित सर्तहरू: ट्रान्सम्युट ( v ), ट्राफर्मुटिकल ( एड ), ट्रांसमिटरेटिक ( एड ), ट्रांसमिनिस्टिस्ट ( एन )
कीमियाको क्लासिक लक्ष्य आधारभूत धातुको नेतृत्वलाई अधिक मूल्यवान धातु सुनमा परिणत गर्न थियो। जबकि कीमियाले यो लक्ष्य हासिल गरेन, भौतिकी र केम्यास्टहरूले सिकेका तत्वहरूलाई कसरी प्रसोधन गर्न सिके।
उदाहरणका लागि, ग्लेन सेबर्गले 1980 मा बिस्मुथबाट सुन बनाउनुभएको थियो। त्यहाँ रिपोर्टहरू छन् कि सेबर्गले पनि एक मिनेटको नेतृत्वमा सुनको मात्रामा , संभवतः बिस्मुथ मार्फत मार्गमा पारे । तथापि, सुन भित्र नेतृत्व ट्राफिक गर्न सजिलो छ:
197 Au + n → 198 Au (आधे जीवन 2.7 दिन) → 198 हङक + एन → 199 हग + एन → 200 हग + एन → 201 ह्याग + एन → 202 हग + एन → 203 हग (आधा जीवन 47 दिन) → 203 एलएल + n → 204 TL (आधा जीवन 3.8 वर्ष) → 204 पीबी (आधा जीवन 1.4x10 17 वर्ष)
स्पेलेशन न्यूट्रॉन स्रोतले कण त्वरणको प्रयोग गरेर सुन, पिरिनियम, र इरिडियममा तरल पारा पारेको छ। स्वर्णण पारा वा प्लेटिनम द्वारा (परमाणु रिएक्टर प्रयोग गरेर सुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ) रेडियो रेडियो आइसोटोसहरू। यदि पारा-196 सुरूवात आइसोटोपको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने, इलेक्ट्रोन क्याप्चर पछि पछिल्लो न्यूट्रॉन क्याप्चरले एकल स्थिर आइसोटोप, सुन-197 उत्पादन गर्न सक्दछ।
शब्द ट्रांसमिशन कोम्यामी को शुरुआती दिनहरुमा फिर्ता जान सकिन्छ। मध्य युगको बेला, परम्परागत हस्तान्तरणका प्रयासहरू उल्टो भए र अलचेमा हेनिरिक खर्राथ र माइकल मेयर्सले क्रिसोपियोशियाको धोखाधड़ी दावीको सामना गरे। 18 औं शताब्दीमा, कीमियाले मुख्यतः रसायन शास्त्र द्वारा विज्ञान को माध्यम ले आपूर्ति गरेको थियो, एन्टोन लेवीओयरियर र जॉन डल्टन पछि एथिकिक सिद्धान्त को प्रस्ताव गरे।
ट्रांसमिशनको पहिलो साँचो अवलोकन 1901 मा आयो, जब फ्रेडरिक सोड्डी र अर्नेस्ट रदरफोर्डले थोरियमलाई रेडियोकर्मिक क्षय मार्फत रेडियममा परिवर्तन गरे। सोड्डीको अनुसार, उनले यस्तो घोषणा गरे, "" रौतफोर्ड, यो ट्रांसमिशन छ! "कुन रूटरफोर्डले जवाफ दिए," ख्रीष्टको लागि, सोडी, यो टेलिभिजनलाई बोलाउँदैन। तिनीहरू हाम्रो टाउकोमा अलमलिस्टको रूपमा पाउनेछन्! "
रसायन विज्ञान मा अल्कोक्साइड परिभाषा
रिएक्शन परिभाषा को एंथिलापी
अस्पष्ट परिभाषा र उदाहरण
बीटा कण परिभाषा
इलेक्ट्रोमिकल सेल परिभाषा
पानीको क्रिस्टलाइजेशन परिभाषा
रसायन विज्ञान मा मास परिभाषा
एटमिक मास इकाई परिभाषा (amu)
Alkoxy समूह परिभाषा
प्रेरणात्मक प्रभाव परिभाषा (रसायन विज्ञान)
Amalgam परिभाषा र प्रयोग
कसरी चुम्बकीय स्लिम
बौद्ध र दया
इस्लाममा लडकियहरुको लागि शिक्षा
किशोरहरुको लागि शीर्ष 10 भक्तिहरु
रोनाल्ड रीगन उद्धरण
शीर्ष 25 नयाँ इङ्गल्याण्ड कलेज र विश्वविद्यालयहरू
औद्योगिककरण के हो?
अमेरिकामा नि: शुल्क अंग्रेजी कक्षाहरू सिक्दछन्
स्थैतिक बनाम गतिशील गतिशील लिंक लाइब्रेरी लोड हुँदैछ
2014 बाट संरक्षणत्मक सिनेमाहरू
'एक फर्टिव लाग्रिमा' गीत र अंग्रेजी अनुवाद
शीर्ष 10 शकीरा गीतहरु स्पेनिश मा
हिडन मट्जह: अफिकम र यसको निस्तारमा भूमिका
10 यार्ड पेडहरू खराब भए
ट्रेडमार्क रजिष्ट्रेसनले कति लामो छ?
190 को लागि कल्पना र गैर-फिक्शन समर कानुन पढाई सूची
येशूको चमत्कार: एक स्त्रीको दमन-पापी बेटीलाई निको पार्दै
माथि रोड आइल्याण्ड कलेज
यूनिभेरियन यूनिवर्सलवाद एक ईसाई चर्च हो?
मूल विभेद - अंग्रेजी र परिभाषा मा उदाहरण
ESL कक्षाकोठाका लागि शब्द गेम
सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन एमबीए कार्यक्रम
Eschatology के हो?